တိုင်- နှင့်lantbrevbärarservice | Holmbygden.se
Holmes မှာမဆိုအံဆွဲဘို့အချိန် Emptying. 10:00.
နှင့် ICA Liden:
ရက်: 17. အားလပ်ရက်များ: 13.
နှင့် ICA Kovland:
စာ / အထုပ်၏ဖြန့်ဝေ.
ကျေးလက်စာပို့သမားနှင့်အတူနေအိမ်ထဲကနေအက္ခရာများနှင့် packages များ Send
သင်တစ်ဦးဆွဲထားနိုင်ပါတယ် “ညှပ်” သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်ပုံးထဲမှာဒါစာပို့သမားခြံသို့အပြေးနှင့်အထုပ်ကိုပင်ယူဆောင်လာ. သငျသညျစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အထုပ်ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင် – နှင့်စာပို့သမားရဲ့ကားဦးချိုကိုနားထောင်ရန်ရှိသည်မဟုတ် – သင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံနှင့်အတူစာတိုက်ပုံးထဲမှာတိုက်ရိုက်အိတ်၌ထားတော်မူ၏နိုင်ပါတယ်. မဆိုပြောင်းလဲမှုကိုလည်းစာတိုက်ပုံးထဲသို့ကျ, ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေပြီးနောက်နေ့က, သငျတို့သသက်သေပြလိုလျှင်, ဒါကြောင့်လည်းစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်.
ကြီးမားသောတင်ပို့ရောင်းချမှု? tel.nr အပေါ်Lantbrevbärarenförသဘောတူညီချက် Call. အောက်တွင်.
ကျေးလက်စာပို့သမားနှင့်အတူ package hemlevererat
သင်ဖို့လမ်းပေါ်မှာအထုပ်ရှိသည် Do, သင်နှင့် ICA Liden မှ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပါကအခမဲ့ကျေးလက်စာပို့သမားနှင့်အတူ hemlevererat ရ. သင်လိုအပ်အားလုံးသည်သင်၏အဋဖြစ်ပါသည် Olli-id သည် / brev-id သည် / SMS ကိုကုဒ် နှင့်စာပို့သင်္ကေတ (86041). ထို့နောက်ရုံမေးလ်ထရပ်ကားများအတွက်စောင့်ဆိုင်း.
kl. 7-9, ရုံး Nacksta sorting: 072-246 08 19
ညနေအပြီး. 9, Holmes ရဲ့ကျေးလက်နေတစ်ဆင့်လည်းစာပို့ (ခဲ့): 072-246 10 74
ဒုတိယအ, လက်စွပ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း Nacksta: 010-436 63 29
ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ငွေသားချက်လက်မှတ်ပေးဆောင် / värdeavi
အနည်းဆုံးအားအားလုံးနေသောအိမ်ထောင်စု 80 သို့မဟုတ်တစ်မသန်စွမ်း PlusGirot နှင့် BGC မှဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှိ, နှင့်ကျေးလက်နေစာပို့သမားကတဆင့် PlusGirot ငွေအမိန့် / Värdeaviရွေးနှုတ်တော်မူ. ဤဝန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်, ကိုခေါ် “Brevgirot”, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လျှောက်လွှာစေရန်လိုအပ်ပါတယ်.
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်လျှောက်လွှာ: Brevgirot.se (fd. ဆွီဒင်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်).
ကလူသူအ, ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်မသန်မစွမ်း၏, ပုံမှန်lantbrevbärarserviceကိုလည်းအောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အဖြစ်စာတိုက်ပုံးမှာသူတို့ရဲ့မေးလ် retrieve နိုင်ခြင်း:
ဆိုက်နယ်နိမိတ်မှာမေးလ်များဖြန့်ဝေ, အိမ်သူအိမ်သားနေသော၏ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင် (သင်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်းမှာစာတိုက်ပုံးရနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်).
ထိုကဲ့သို့သောရေနံပေါင်းတင်အဖြစ်အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုနှင့်အတူပေးစာနှင့်ကှကျဖြန့်ဖြူး, Rek, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကို Safe.
အထွက်အက္ခရာများနှင့် packages များ၏ retrieval.
ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ချောထုပ်, Rek, နှင့်လက်ခံရရှိသူကချီးမြှင့်လုံခြုံမှုကတောင်းဆို. ယနေ့ထုတ်ပေးအပ် Uninstall ကို / လိပ်စာကဒ် 1.
Applications ကိုကျေးလက်စာပို့သမားသို့မဟုတ်အနီးဆုံးစာတိုက်ပေးပို့ထားကြပါသည်. Post ကိုရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဖုန်း. 020-23 22 21 ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်အတူသင်ကူညီ. ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ.